Best PlayStation 2 yesiphelo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Iiconsoles, Videogames
Ihlabathi leemulators libanzi kwaye linomdla, kwabo bangenalo unxibelelwano olukhulu nabo, ziinkqubo zesoftware yePC ezenza ukuba ibe likhonsoli ebuyela umva ehambelanayo. Yeyona ndlela ikhethiweyo yabathandi bekhonsoli ukuze bakwazi ukukhumbula ezona zihloko zibalaseleyo zePlayStation, I-Xbox, iNintendo Game Cube kunye nezinye iintlobo zeekhonsoli ezivela kwiminyaka eyadlulayo esingasakwazi ukudlala ngayo ngenxa yezizathu ezithile. Ukufaka olu hlobo lwesoftware kuhlala kulula kwaye kuyakhawuleza, kwaye ukuba kukho into ongayaziyo, ungakhathazeki, kwiActualidad Gadget siza kukufundisa into oyifunayo.
Enye yeekhonsoli ezinekhathalogu ebalaseleyo esinokuyicingela yayiyi-PlayStation 2, hayi kuphela esemgangathweni kodwa kwanobungakanani, yiyo loo nto iba ilekese yokwenyani, ngoku kuphakama umbuzo: Yeyiphi i-emulator efanelekileyo yePS2? Hlala nathi kwaye uza kubona ukuba yeyiphi eyona inomdla kwezi zixhobo kunye nendlela yokuyiqwalasela.
1 Yintoni i-emulator kwaye kutheni ndingayifaka?
2 I-PCSX2, eyona midlalo ilungileyo ye-PlayStation 2
3 Uqwalaselo lokuqala lwe-PCXS2
4 Ndingadlala njani ngesilawuli sePCSX2?
5 Uqwalaselo lwegraphic lwePCSX2
6 Izigqibo kwi-PCSX2
7 Best PlayStation 2 imidlalo
Yintoni i-emulator kwaye kutheni ndingayifaka?
Akunyanzelekanga ukuba unike iingcaciso ezininzi ngoku, ukuba ufike kule ndawo kungenxa yokuba uyazi ukuba yintoni. Ngokwenyani, sisoftware leyo ikuvumela ukuba udlale imidlalo yevidiyo ukusuka kwikhonsoli ngqo kwi-PC ngenxa yentsimbi yayo kunye nenkqubo yokusebenza. Ngenxa yokusikelwa umda kwezobuchwephesha, asizukufumana i-emulators yesizukulwane samva nje okanye ezona zixhobo zakutshanje, kodwa kulula kakhulu ukufumana i-emulators yokuyeka okanye ukubuyisa i-retro, kuba kulula kakhulu ukwenza olu hlobo lomxholo kubo, ngokunjalo njengoko kukho umxholo ongaphezulu kwinethiwekhi ngohlobo lweekopi zokulondoloza zemidlalo yevidiyo.
Ngamafutshane, ukufaka olu hlobo lwesoftware kuyakuvumela ukuba udlale ikhonsoli yakho yakudala ngexesha lakho lokuzonwabisa ngokuthe ngqo kwikhompyuter yakho, ukuze ukhumbule ezo zihloko uthi ngenye imini wazilibala ngenxa yezizathu ezithile. Ewe kunjalo, ukuba ufuna "ukunika isekela" kwi-PlayStation 2, le yiposti yakho, siza kukubonisa ukuba yeyiphi eyona ndlela ilungileyo ye-PlayStation 2 WindowsIndlela yokufumana yonke intsebenzo enokusinika yona Masihambe!
I-PCSX2, eyona midlalo ilungileyo ye-PlayStation 2
Le software izibeke njengeyona ilungileyo xa kuziwa ekulingiseni iPlayStation 2 kwiPC, unokucinga ukuba iyenzile ngokuchanekileyo ngenxa yegama layo okanye ngenxa yekhathalogu yayo, kodwa iyaqhubeka ngakumbi, iPCXX2 iyakwazi ukubonelela Ukusebenza ngokugqwesileyo esinokukufumana kwikhonsoli yoqobo. Enkosi kulungiso kwinqanaba lesoftware kunye noluntu olubalulekileyo, akukho nzima ukufumana imidlalo eguqulweyo kwaye ukongezwa kwisoftware yokulinganisa ukongeza imbono ye "HD" kwimidlalo yethu yakudala yePlayStation 2.
Singalanda PCSX2 ngqo kwi LONTO kwiwebhusayithi yayo esemthethweni. Ngaphaya Windows 10, sineenguqulelo zeLinux kunye neMacOS, kutheni ungalindelanga loo nto? Ewe ungalinganisa iPlayStation 2 phantse kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza. Ukongeza, ngaphakathi kwiwebhusayithi siza kufumana umxholo onje ngesikhokelo sokumisela, iindaba, uhlaziyo, iifayile kunye nokunye okuninzi. Ukuba ungumdwelisi wenkqubo, uza kuba nethuba lokuguqula ikhowudi ye-PCSX2 kuba isimahla, kwaye uya kuba nakho ukwenza amanyathelo akho okuqala ngokulinganisa.
Ukwenza oku ngokulula siza kukhuphela ingxelo ezinzileyo yenkqubo yethu yokusebenza kwaye siya kuyiphumeza kwaye siyifake ngendlela efanayo ukuba siza kufaka nayiphi na enye isoftware yezi mpawu kwinkqubo, kwaye ungakhathazeki malunga nezinye, siza kukunika iingcinga ezisisiseko zokumisela yiyo.
Uqwalaselo lokuqala lwe-PCXS2
Nje ukuba sisebenzise le nkqubo okokuqala, nasemva kokufaka iwizard, Siza kukhetha ulwimi lwethu olukhethiweyo kwaye siza kugcina ii-plugins ze-emulator (izongezo eziya kuthi zisivumele ukuba sisebenze ngakumbi kwisoftware) ngokungagqibekanga. Inyathelo elilandelayo iya kuba luqwalaselo lweBIOS, kuba oku kufanele ukuba ngaphambili sasikhuphele i-PlayStation 2 BIOS ehambelana nommandla wethu, okanye eyona inomdla kuthi (ukuba ngokomzekelo sifuna ukulingisa imidlalo ekhethekileyo evela eJapan).
Ukuba sine-PlayStation 2, ngaphakathi kwecandelo le-PCSX2 lokukhuphela sinayo Indawo yokulahla inkunkuma ye-BIOS-Binary (LINDA), Inkqubo eya kusivumela ukuba sikhuphe i-BIOS ngokuthe ngqo kwi-PlayStation yethu 2. Ukuba kungenjalo sifuna ukulingisa i-PlayStation 2 ngokuthe ngqo kwi-BIOS engeyoyethu ipropathi, sele singena kwimeko yomthetho ithandabuzekayo, kwimeko apho sicebisa Ukuya eluntwini okanye kwimithombo yeendaba ekhethekileyo apho unokufumana khona i-BIOS, uhlala uphantsi koxanduva lwakho (i-Actualidad Gadget ayixhasi okanye inoxanduva lokulinganisa ngokungekho mthethweni okanye naluphi na uhlobo lobugqwetha ngabasebenzisi).
Nje ukuba ukhethe ifayile ye-BIOS kunye nomhloli wefayile kwaye ubone ukuba kongezwe kuluhlu lwe-emulator yethu, siza kucofa ku "Kulungile" kwaye Siza kudlulela kwinqanaba elilandelayo loqwalaselo, umyalelo.
Ndingadlala njani ngesilawuli sePCSX2?
Kuyacetyiswa ukuba usoloko usiya kwi Windows 10 ukufunyanwa okuzenzekelayo kunye nokuqhutywa kwangaphambili kwabaqhubi, enye indlela elungileyo umzekelo nayiphi na isilawuli seXbox, sele uyazi ukuba ikhonkco likaMicrosoft liyahambelana ngokupheleleyo Windows 10, ke iphedi yamaqhosha iya kuza icwangciswe kwangaphambili kwaye kuya kufuneka sixhume isinxibelelanisi se-USB kwaye sonwabele umlawuli wethu.
Nangona kunjalo, ukuba eyona nto uyifunayo kukufumana okuninzi kumava usebenzisa abalawuli bePlayStation, Ndicebisa ukukhuphela Isithuso (LINDAeya kusivumela ukuba sixhume kuphela isilawuli se-PlayStation 3 nge-USB kwiPC ukuyilungiselela. Ukwenza oku, siya kufaka inkqubo kwaye ucofe ku "Umphathi Wokuqhuba" kunye nesilawuli sePlayStation 3 esixhumeke nge-USB, ngaloo ndlela ukhuphele kwaye ufake abaqhubi abafunekayo.
Ke ngabaqhubi abafakelwe isilawuli se-PlayStation 3 DualShock 3, siya kukhuphela Ngcono ds3 (LINDA), eyenzelwe iiwindows eziza kuthi zisivumele ukuba siqwalasele amaqhosha e-PlayStation 3 yethu ukuze yonke into isebenze ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ukusetyenziswa kwayo kuyinto enomdla ngokwenene, ngokulula nge-DualShock 3 eqhagamshelwe yi-USB siza kucofa ku «Entsha» ecaleni kwe «Ikhethiweyo iProfayili» kwaye siza kwenza iprofayili eya kuba yeyethu esiyisebenzisayo ukudlala.
Uqwalaselo lwegraphic lwePCSX2
Ngoku okubalulekileyo kukufumana okuninzi kuyo, kuba oku siza kuqala i-emulator, ngoku ekubeni sinayo yonke into ekufuneka siyidlalile. Nje ukuba singene ngaphakathi, siza kucofa kwi «Useto» kwaye siya kuya kwiVidiyo> Useto lwePlagi Imenyu ye I-GSD X10, Ukucwangciswa kwemizobo ye-PlayStation 2 emulators kwaye kufuneka sigcine ezinye iiparameter ezifanayo nezo siza kukunika zona apha ngezantsi kwiikhompyuter zoluhlu oluphakathi (i3 / i5 - 6GB / 8GB RAM - 1GB Graphics).
Okokuqala siza kuthathela ingqalelo umlinganiso wescreen, sinokukhetha ukudlala i-4: 3 okanye i-16: 9, yonke into iya kuxhomekeka kwindlela oyifuna ngayo, ndingumthandi wemeko-bume yeplanethi. Olu seto luya kutshintshwa kwi "Useto lwe Window" kuseto lwevidiyo. Nangona kunjalo, masikhumbule ukuba uninzi lweemidlalo zePS2 zenzelwe ifomathi yesi-4: 3.
Adapter: Sigcina useto olungagqibekanga
Ukujongana: Sikhetha ukhetho "BOB TTF"
Umnikezeli: Sitshintshele kwi-Direct3D ukhetho (D3D11 kwiinkqubo eziphezulu)
Nika amandla iFXXA: Siphawula olu khetho ukuze kusebenze i-antialasing
Yenza ukucoca: Yiyo loo nto senza ukuba ukucoca kokucoca kusebenze
Nika amandla iFX Shader: Iya kuphucula icandelo legraphic ukuba siyayisebenzisa
Ukuhlunga kweAnisotropic: Iya kuphucula ukuthungwa, siya kukhetha ukhetho lwe-2X kwizixhobo eziphakathi
Nika amandla ukuNqatshelwa: Siza kuyisebenzisa nangayiphi na imeko
Ngokuphathelele isisombululo semvelisoSiza kudanisa phakathi kwe-720p okanye i-1080p, nangona eyona nto ilungileyo kukuba sithathe isalathiso ukuphakama kokubeka iliso kwethu kwaye sikusebenzise kwi-4: 3 ratio ukuze isinike iziphumo eziyinyani nezingaqinisekiswanga, ngenxa yoku Sisebenzisa le fomyula ilandelayo: (4x »ukuphakama kwesilumkiso sethu») / 3 = XNantsi indlela esiza kusifumana ngayo isisombululo esifanelekileyo sokudlala esi sisimbo sokumisa esweni esweni.
Ekugqibeleni, ngenxa yezi zizathu, kunye noluntu olubalulekileyo olusemva I-PCSX2. Siza kufumana ngokulula iiplagi ezininzi kwi-intanethi eziya kuthi zisivumele ukuba siguqule uninzi lweempawu zemidlalo yevidiyo esifuna ukuyidlala ngokuthanda kwethu. Ngokuqinisekileyo, Ukulingiswa kweekhonsoli ezothulwe ngokupheleleyo ezinje ngale kusivumela ukuba sikhumbule loo midlalo mihle siyishiye ngasemva ngezizathu ezahlukeneyo, Kungoko sinokusebenzisa izixhobo zekhompyuter yakho ukuze senze intsebenzo encinci kwicandelo lokuzonwabisa.
Le enomzami wokulungisa ibekwe ukusukela ngo-2011 njengeyona ndlela iphambili yezo nostalgic zePlayStation 2, kwaye into ibonisa ukuba iya kuhlala injalo ixesha elizayo. Siyathemba ukuba esi sifundo simnandi kunye nengcebiso malunga ne-emulator efanelekileyo yePS2 ikuncedile kwaye ungafumana okuninzi kuyo. Ndiza kuthatha inkululeko yokucebisa ngemidlalo ye-PlaySation 2 ebalaseleyo apha ngezantsi.
Best PlayStation 2 imidlalo
I-Metal Gear Solid 3: Ukutya inyoka
Theft Grand Auto San Andreas
Umhlali Evil 4
Inqaku lokugqibela XII
IGran Turismo 3: Uhlobo oluthile
UMtyholi Unokukhala 3: Ukuvuka kukaDante
UThixo weMfazwe II: Impindezelo kaThixo
INkosana yasePersi: Iisanti zeXesha
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Yeyiphi i-emulator efanelekileyo yePlayStation 2?
Ukuthenga i-Samsung Galaxy S8 nge-644 euro sele kunokwenzeka
Ukunikezelwa kwePixel 2 kaGoogle kusishiya sonke iscreen se-smartphone